Aktarka filim laga sameeyay burcad badeeda Somalia iyo xaaskiisa oo laga helay cudurka CronaVirus (La soco warar kale) - Latest News Updates
Aktarka filim laga sameeyay burcad badeeda Somalia iyo xaaskiisa oo laga helay cudurka CronaVirus (La soco warar kale)
Waxaa sii kordhaya walaaca dalalka caalamka ay ka qabaan faafitaanka xowliga ku socda ee caabuqa cudurka halista ee CronaVirus, kaasi oo iminka saameeyay inta badan wadamada adduunka.
Aktarka caanka ah ee lagu magacaabo Tom Hanks oo atoore ka ahaa filimka Captan Philips, kaasi oo laga sameeyay burcad badeeda dalka Soomaaliya iyo xaaskiisa Rita Wilson oo ku sugan wadanka Australia ayaa laga helay cudurka CronaVirus iyadoo la geliyay xaalad karantiil ah.
Wararka ayaa sheegaya in Tom Hanks oo u dhashay dalka Mareykanka uu u joogay Australia u joogay sameynta filim cusub, iyadoo dhaqaatiirta dalkaasi ay sheegeen inay la tacaalayaan xaaladda caafimaad ee aktarkaasi iyo xaaskiisa.
Filimka caanka ah ee Captan Philips ayaa waxaa ka qeyb qaadanaya jilaa Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Barkhad Kaariye iyo dhallinyaro kale, kuwaasi oo iyagu ku jilayay filimka burcad badeeda Soomaalida isla markaana qabsanayay markab lagu magacaabo MV Maersk.
Dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya dalka Mareykanka ayaa sheegaya in madaxweyne Donald Trump xayiraad ku soo rogay safarada diyaaradaha ka imaanaya 26-dal oo ka tirsan qaaradda Yurub marka laga reebo Ingiriiska iyo Airland.
Afhayeen u hadlay ururka Midowga Yurub ayaa xayiraadda Turmp ku tilmaamay inay tahay mid siyaasadeysan bacdamaa uu sheegay in cudurka CronaVirus dibadda uga yimid dalka Mareykanka.
Tom Hangs oo ka mid ah jilayaasha caanka ah ee filimada Hollywoodka waxa uu jilay filimo caan ka noqday caalamka, isla markaana uu ku kasbaday taageerayaal fara badan oo adduunka dacalladiisa degan, hase yeeshee dowladda Australia ilaa iyo iminka ma shaacin in aktarkaasi iyo xaaskiisa loo masaafurinayo dalkiisa Mareykanka tan iyo markii laga helay cudurka CronaVirus.
Cabsida curudka CronaVirus ee ku sii kordheysa caalamka ayaa mareysa heerkii ugu sareysay, kaddib markii uu saameeyay tartamada ciyaaraha UEFA Champions Legaue iyo kan Premier Leaguse ee wadanka Ingiriiska qaarkood la ciyaaray garoomo faaruq ah.
Melbourn – Australia